Hawlaha gu'gu waxay ku dari doonaan 500,000 cagood oo laba jibbaaran oo ah aqalka dhirta lagu koriyo ee hydroponic
Lisbon, Maine - Springworks, oo ah beer -biyoodka ugu weyn uguna horreeya ee la xaqiijiyay ee New England, ayaa maanta ku dhawaaqday qorsheyaal lagu kordhinayo 500,000 cagood oo laba jibbaaran oo ah meel lagu koriyo. Ballaarinta baaxadda leh ayaa sii wadi doonta u adeegidda macaamiisha ugu weyn ee Beeraha Maine, Supermarket-ka Cuntada oo dhan iyo Hannaford Su ...
Cannabis Aurora wuxuu dhigaa 1.7 milyan oo cag laba jibbaaran oo behemoth ah aagga iibka
Aurora Cannabis waxay qorsheyneysaa inay dejiso mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn uguna qaalisan ee lagu koriyo xashiishadda taariikhda, laakiin qof kasta oo iibsada ayaa laga yaabaa inuu ku mashquulo inuu helo kharash badan si mashruuca si guul leh loogu dhammeeyo. Sida laga soo xigtay agabyada xayeysiinta ee dadweynaha laga heli karo, Aurora waxay maalgelisay ...
ku saabsan aqalka dhirta lagu koriyo ee AX
Sidaan wada ognahay, Shiinuhu waa dal leh hiddo -dhaqan dheer. Wax -soo -saarka beeraha ayaa sidoo kale sii waday inuu si xoog leh u koboco horumarinta farsamada. Bilowgii, waxaan ka shaqaynay guri yar oo burbursan ....
Imisa nooc oo lagu koriyo ayaa jira? Waxaa jira laba siyaabood oo lagu kala garan karo tan. Habka ugu horreeya: Sida waafaqsan maaddada daboolka si loo kala saaro aqalka dhirta lagu koriyo. Sanado badan tan iyo markii aqalka dhirta lagu koriyo ...
Codsiga Sanduuqa Greenhouse
Waxaan leenahay ujeedooyin kala duwan oo aqalka dhirta lagu koriyo Soo saar miro iyo khudaar, beera ubaxa, korinta dhirta dhalinyarada ama cilmi -baarista xashiishka Waxaa jira laba qaybood oo lagu gaarayo hadafyadan wax ...
Sida loo helo deynta aqalka dhirta lagu koriyo
Marka la qorsheynayo in la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo, dhammaanteen waxaan u baahannahay inaan la kulanno dhibaato, maalgelin. Marka aadan ka dalban karin lacag dowladda ama aad deyn ka qaadato bangi. Waxaad isku dayi kartaa inaad waxbadan ka ogaato Kobaca Awoodda ama Agamerica. Si kasta oo uu qorshaha u fiican yahay, mar walba waxaad u baahan tahay qorshe gurmad Qiimaha alaabta ...